Umkhakha Izindaba Abakhiqizi | China Imboni Izindaba Suppliers & Factory
I-China Mobile uyakhile ezingaphezu kuka 20,000 5G eziteshini base e 52 emizini eyinhloko e China
umlawuli ku 19-09-17
Ngo-September, 5G ISIZINDA commercial abasondela, futhi lonke ulwazi mayelana 5G is ezithinta izinzwa le mboni. UNICOM kanye Telecom ziye ngokuhlanganyela eyakhelwe 5G eziteshini base nganeno, futhi China Mobile nayo ukwenza 5G ukwakhiwa inethiwekhi imizamo emikhulu kuloluya hlangothi. Ngaphezu kwe ...
Indlela Qonda Antenna
umlawuli ku 19-07-23
Antenna isetshenziswa ukuba adlulisele amasignali kusuka eziteshini base nomakhalekhukhwini. Ezikhathini zasendulo, isakhiwo kunazo zonke e yonke imizi kumele ibe umbhoshongo TV. Ithelevishini uthola amasignali kusukela embhoshongweni TV ngokusebenzisa antenna. Isiswebhu antenna ezimbili antenna efanayo phezulu ifomu antenna m ...
GPS Marine Antenna , Yagi Antenna , Vhf Marine Antenna, Omni Antenna 868mhz,